के यो सच छ कि तपाइँको रैंकिंग मा एचटीटीपीएस र एसईओ प्रभाव छ?
आउनुहोस् यो यसलाई प्रदान गर्नका लागि - आजकल, दृढ निर्भर निर्भर HTTPS र एसईओ लगभग कुनै बहिष्करणको साथ, खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरूको सूचीमा हरेक वेबसाइट रेटिङ असर गर्छ।. वेबसाइटहरू HTTP बाट HTTPS बाट स्विच गर्न पर्याप्त कारणहरू छन्, केवल सर्वोत्तम र सुरक्षित प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि हालको वैश्विक प्रवृत्तिलाई विचार गर्दै. व्यवसाय चलिरहेको दौडने दृष्टिकोणबाट, उदाहरणको लागि, अनलाइन अनलाइन स्टोर, HTTPS र SEO प्रभाव पूर्णतया स्पष्ट हुन्छ. हामीले भर्खरै यसको सामना गर्नु पर्छ - यो सहि राम्रो तरिकाले राम्रो काम गर्न उत्तम छ. र वेबको आधुनिक वास्तविकताले हामीलाई यस्ता सफल परिवर्तनहरूको अगाडि हरेक सफल अनलाइन परियोजनालाई राख्नको लागि हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्न आवश्यक छ - vitamin c solgar skroutz cyprus.
यसबाहेक, गुगलले भर्खरै नै यसको उच्च प्राथमिकताको घोषणा गरेको छ, विशेष गरी राम्रो सुरक्षा स्तरमा।. र तपाईंले सम्भव छ कि खोजी विशाल द्वारा समर्थित सबै सेवाहरू अब स्वचालित रूपमा एक सुरक्षित जडान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ (जस्तै Google खोजी आफै, जीमेल, Google Drive, आदि।. ). खैर, हामी हेर्छौं कि Google को टोली ब्राउजिंग को लागी इन्टरनेट सुरक्षित स्थान बनाउन र वित्तीय लेनदेन सुरक्षित गर्न, अझ पहिले भन्दा पनि कठिन छ!
उल्लेख नगर्ने कि अनलाइन बजारमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडीहरू सधैं एक-1 ग्रेड उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो काम गर्दै छन्।. वास्तव मा, सुरक्षित एचटीटीपीएस एन्क्रिप्शन प्रक्रिया को माध्यम ले पहिले देखि नै अविश्वसनीय स्तर को सुरक्षा पहिले देखि नै आफ्नो व्यवसाय चलान को मानक स्थिति बन्यो. मेरा मतलब छ कि सबैभन्दा अनुभवी अनलाइन ग्राहकहरूले एचटीटीपीएसको साथ राम्रो सुरक्षा स्तर प्रदान गर्ने वेब पेजहरूसँग मात्र सम्झौता गर्ने आशा गरिरहेका छन्. त्यो केवल पूर्वनिर्धारित रूपमा सुरक्षित प्रयोगकर्ता अनुभवको आशा गर्नुहुन्छ, ती अझै पनि बिना एसएसएल प्रमाणपत्रहरू द्वारा प्राप्त भएका पुरानो प्लेटफर्महरू छोड्दैछ।.
Google को SERPs को सूची मा तपाईंको व्यवसाय वेबसाइट को पदोन्नति मा HTTPS र एसईओ को प्रभाव को बारे मा अझै पनि हिचकिंदगी? तपाईंले Google बाट आधिकारिक वेब पृष्ठहरूमा सबै उत्तरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, मुख्य रूपमा बनाइएकाहरूलाई अझै पनि HTTP बाट HTTPS बाट स्थानान्तरण गर्ने अन्तिम निर्णय पाउने निश्चित. अनलाइन HTTP को एसईओ प्रभावबाट आउँदा अनलाइन प्रमोशनमा केही द्रुत फायदाहरूमा तपाईँलाई पक्का गर्नुको सट्टा, म तपाईंको वेबसाइटको लागि HTTP बाट HTTPS बाट प्रक्रियाको संक्षिप्त अवलोकन गर्न तयार छु।.
सही तरिकाले संभाला हुँदा (स्वयं पनि द्वारा), तपाईंको वेब पृष्ठहरू HTTPS मा सारिएको हो रही सीधा र सरल प्रक्रिया हुन सक्छ:
तपाईंको एसएसएसएल प्रमाणपत्र खरीद
तपाईंको वेबसाइटको होस्टिङ खाता प्रयोग गरेर प्रमाणपत्रको लागि स्थापना प्रक्रियाको माध्यमबाट पार गर्नुहोस्
तपाईंको सबै लिङ्कहरूमा डबल जाँच गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै कि तपाइँको माइग्रेशन पूर्ण भयो, HTTPS बाट पूर्ण अद्यावधिक बिना कुनै URL सधैंभरि हराउनेछ
सबै पछि, तपाईको वेबसाइट स्थानान्तरणको खोजी इन्जिन लाई सूचित नबिर्सन. केवल 301 रिडिरेक्टहरू HTTPS मा सेट अप गर्न, प्रत्येक प्रयोगकर्ताले तपाईंको कुनै पनि वेब पृष्ठमा बुकमार्क गरेको छ जुन तपाईंको नव-अद्यावधिक भएकाहरूलाई स्वचालित रूपमा निर्देशित गरिंदैछ।. अन्तमा, तपाइँसँग Google को खोज कन्सोलको साथ कुनै समस्या हुनुपर्दछ, म एक पटक र सबैका लागि यो रोक्नको लागि HTTP र HTTPS आधारित पृष्ठहरू अलग गर्न दुई व्यक्तिगत गुणहरू सिर्जना गर्न सिफारिस गर्दछु।.